China lip gloss vendor သည်ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် lip plumper gloss သည်သင့်ကိုယ်ပိုင် lip gloss line lip plumping gloss ကိုစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Iris အလှအပ
Matte နှုတ်ခမ်းတိတ်ခွေသီးသန့်တံဆိပ်ပါသောနှုတ်ခမ်းနီ ...
Lip liner သီးသန့်တံဆိပ်ရက်စက်မှုကင်းမဲ့သောအကောက်ခွန်တံဆိပ် ...
အရည်နှုတ်ခမ်းနီနှင့် lip liner များသည်လက်ကားအရောင်းအဝယ် ...
လက္ကားနှုတ်ခမ်းချောင်းထုံးစံလိုဂိုသက်သတ်လွတ်ကတ္တီပါနှုတ်ခမ်း sti ...
nude lip gloss ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် custom nude glossy lipg ...
Lipgloss ရောင်းချသူစိတ်ကြိုက် lip gloss ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် diy c ကို ...
OEM မျက်နှာအုတ်မြစ်မိတ်ကပ်အရည်လက္ကားထုံးစံ p ...
လက်ကား eyeshadow palette သက်သတ်လွတ်မြင့်မားသောခြယ်ပစ္စည်း priva ...
lip gloss ရောင်းချသူကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် lip plumper gloss သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် gloss line lip plumping gloss
တောက်ပနေသည့်အဆုံး၌အာဟာရပြည့်ဝစေသောနှုတ်ခမ်း ပေါ့ပါးပြီးစေးကပ်မှုမရှိသောခံစားမှု။ နှုတ်ခမ်းများကိုဗီတာမင်နှင့် Shea ထောပတ်ဖြင့်စိုပြည်စေ။ စွဲလမ်းစေသောတောက်ပမှု၊ အာဟာရရှိသောအ ၀ တ်အစားများ၊
EXW စျေးနှုန်း: US $ 0.99 - 2.99 / Piece
Min.Order အရေအတွက် - 3000 အပိုင်းအစ / အပိုင်းပိုင်း
OEM ။ ODM: ရရှိနိုင်
နှုတ်ခမ်းတောက်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်နေသောပုလဲတောက်ပသောအရောင်များရှိပြီးအရောင်များစွာပေါ့ပါးစွာလျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင့်နှုတ်ခမ်းများသည်တောက်ပ။ တောက်ပသောအရောင်များကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးပါတီလူသတ်သမားဖြစ်လာနိုင်သည်။
နှုတ်ခမ်းမိတ်ကပ်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီး၊ နှုတ်ခမ်းအရောင်သည်လူတို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ plumping glitter lip gloss ထုတ်ကုန်များသည်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်လက်ဆောင်များအဖြစ်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ဤ plumping glitter lip gloss ကိုအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဝတ်စုံများနှင့်အခါသမယများအတွက်မှန်ကန်သော lip gloss ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းအမည် နှုတ်ခမ်းတောက်ပ Plumping
function ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှုတ်ခမ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် ၁။ ရက်စက်မှုကင်းသော / တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ
4.Plumping / တောက်ပ
5. ဗီတာမင်များ / Shea ထောပတ်ပါရှိသည်
OEM / ODM လက်ခံသည်
ထုပ်ပိုး ဒီဇိုင်းအရောင် box ထဲမှာ 1 PCs
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း လေကြောင်း၊ ပင်လယ်၊
ငွေပေးချေမှု TT / Paypal / အနောက်နိုင်ငံများစသည်တို့
A: ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်ကိုသိအောင်အရင်ဆုံးပြောပါရစေ။ ပြီးတော့သင့်လျော်စွာအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးပြီးတာနဲ့အတည်ပြုအတည်ပြုပြီးတာနဲ့နမူနာပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အမှာထားလျှင်နမူနာကုန်ကျစရိတ်ပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
3.Q: OEM ကိုလက်ခံပါသလား ODM ပြီးတော့ငါတို့ဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရမလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ OEM ODM ကိုလုပ်ပြီးဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
၄ ။Q: နမူနာရဖို့ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ။
A: နမူနာအခကြေးငွေပေးပြီးအတည်ပြုပြီးသောဖိုင်များပေးပို့ပြီးသောအခါနမူနာများကို ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အထိပို့ပေးပါမည်။ နမူနာများကို Express မှတစ်ဆင့်သင့်ထံပို့ပေးပြီး ၃-၇ ရက်အတွင်းရောက်ရှိပါမည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမြန်အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်တွင်အကောင့်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုတင်ငွေဖြည့်နိုင်သည်။
5.Q: အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဦး ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကော။
A: ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ မှာယူမည့်ပမာဏနှင့်သင်မှာထားသည့်ရာသီပေါ်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၅ ရက်မှ ၃၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုရှိသည်။ သင့်နိုင်ငံ၌ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်ရချင်သည့်နေ့ရက်မတိုင်မီနှစ်လအလိုတွင်သင်စတင်စုံစမ်းရန်အကြံပြုပါသည်။
A: T / T, Paypal, West Union ကိုလက်ခံပါတယ်။
သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ irisbecosmetics@gmail.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ရှေ့သို့ Matte အရည်နှုတ်ခမ်းနီသီးသန့်တံဆိပ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခမ်းနီလက်လီအရောင်းဆိုင် vegan lipstick ရောင်းချသူကိုပြုလုပ်သည်
နောက်တစ်ခု: နှုတ်ခမ်းသီးသန့်သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်ရက်စက်မှုကင်းသောအကောက်ခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကတ္တီပါ creamy lip liner pen oem lip liner နှုတ်ခမ်းခဲတံ
ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် gloss နှုတ်ခမ်း
lip gloss ရောင်းချသူ
နှုတ်ခမ်း plumper တောက်ပြောင်
နှုတ်ခမ်း plumping တောက်ပ
Lipgloss ရောင်းချသူစိတ်ကြိုက် lip gloss private တံဆိပ် ...
custom lip gloss ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် glitter lip glos ...
နှုတ်ခမ်းတောက်တောက်ရောင်းချသူ custom shimmer lip gloss priva ...
လက္ကားနှုတ်ခမ်းသားတောက်ပ OEM ထုံးစံသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုဂို ...
လက္ကား lipgloss ထုံးစံလိုဂိုခြယ်ပစ္စည်းနှုတ်ခမ်း glos ...
သင်ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်, pls ယခုကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးပေးပို့ပါ။
အမှတ် ၁၆၈၊ လမ်းကြော ၆၄၉၅၊ တင်ဝေလမ်း၊ Jinshan စက်မှုဇုန်၊ ရှန်ဟိုင်း